घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि गर्धन तथा मुखको कसरत – List Khabar
Home / जीवनशैली / घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि गर्धन तथा मुखको कसरत
घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि गर्धन तथा मुखको कसरत
admin January 5, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 171 Views
हाम्रो श्वास फेर्ने नली नाक वा मुखबाट गर्धन हुँदै फोक्सोसम्म पुगेको हुन्छ। निदाएको बेलामा पनि यही नली मार्फत हामीले बिना अवरोध आरामसँग श्वास फेरिरहेका हुन्छौ। धेरैजसो मोटो मानिसमा गर्धनको भागको श्वास नली साँघुरो हुनुको साथै निदाएको बेलामा श्वास फेर्दा गर्धन वरिपरिको मासंपेशीमा कम्पन पैदा हुन जाँदा घुरेको आवाज निस्कने गर्छ।
१. जिब्रोको कसरत
यो अभ्यास योग गर्नेहरु माझ प्रचलित छ। सुत्ने बेलामा मुख खुल्ला राखेर सुत्ने र राति मुख सुक्ने समस्या हुनेहरुलाई यो कसरत बढी उपयोगी हुन्छ। बाँया हातको बुढी औँलाले नाकको दाँयापट्टीको प्वाललाई थिच्नुहोस् अनि बिस्तारै बाँया प्वालबाट लामो श्वास तान्नुहोस्। अनि चोर औँलाले बाँया प्वाललाई थिच्नुहोस् र दाँया पट्टीबाट श्वास छोड्नुहोस्। यसैगरी बाँया प्वाल थिच्दै दाँयाबाट श्वास लिनुहोस् र बाँयाबाट छोड्नुहोस्। यो प्रक्रिया दश पटकसम्म दोहो¥याउनुहोस्।
Previous खाना खाने बित्तिकै नगर्नुहोस् यी ५ काम, नत्र निम्त्याउँछ ग्यास्ट्रिकको समस्या
Next यी हुन् प्लास्टिकको पुतली लिएर सुत्ने पहलवान जो पुतलीसँग बिहे गरे ! सामाजिक सञ्जालमा भए ट्रोल, यस्तो छ उनको रोचक कहानी